I-trailer kaJackass Forever Iletha Inhlekelele Engaphezulu Engacabangi - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-trailer kaJackass Forever iletha iMayhem engenangqondo
by UTrey Hilburn III July 20, 2021 1,016 ukubukwa
Bengingacabangi ukuthi ngizobe ngikusho futhi… kodwa UJackass nabafana abakha UJackass ziyabuya! Lesi sikhathi sizungeze i- UJackass Phakade.
Amazwibela we UJackass Phakade kuhamba kanjena:
Ukubungaza injabulo yokubuyela ndawonye nabangane bakho abakhulu nokudutshulwa okuphelele ku-dingdong, iqembu lokuqala le-jackass libuyele komunye umjikelezo wokubukisa okuhlekisayo, okungenangqondo, nokuvame ukuba yingozi kwamahlaya ngosizo oluncane lwabalingisi abasha abasha. UJohnny nethimba bacindezela imvilophu ngisho nangaphezulu ngo-Okthoba 22 ku-jackass ingunaphakade.
Angiqiniseki ukuthi uJohnny Knoxville nabasebenzi abakawi kanjani njengamanje. Ngisho, ubuhlanya obungokomzimba imizimba yabo efakwa ngabo bukhulu kakhulu. Ngeza kulokho bebekwenza iminyaka futhi. Kubukeka sengathi nabo abakududuzi. Ngiqonde ukuthi, uma ubheka ingxenye ye-trailer lapho uKnoxville ehambisa yonke inkunzi esifubeni nasentanyeni, kufanele uzibuze ukuthi usaphila kanjani angithi?
Kumnandi, kuyisimungulu futhi laba bafana bangene ngendlela enkulu engxenyeni enkulu yesiko le-pop nasezimpilweni zethu… kunalokho besikuthanda noma singathandi.
Ingabe ujabulile ngokuhlola UJackass Phakade ngo-Okthoba 22? Sazise esigabeni sokuphawula.